Inona no tsara indrindra mba hahazoana Color taona jamba fitsapana? - 💡💻 Iris - Blue Light Filter for Eye Fiarovana 🛌👀
Inona no tsara indrindra mba hahazoana Color taona jamba fitsapana?
Color fahajambana koa fantatra amin'ny anarana hoe fahitana loko fahampiana. Noho ny loko fahajambana, ny olona dia tsy afaka mamantatra loko.
matetika, ny olona iray dia tsy afaka manavaka ny loko mena sy maitso.
Dia sarotra ny mahita ny tany am-boalohany ny loko soritr'aretina fahajambana ao ny zaza.
Ankizy manana androm ambany ny saina rehefa hanipy loko eo amin'ny taratasy.
Zaza iray ihany no vokatry ny loko fahajambana in about 25 ankizy.
Noho ny loko fahajambana, ny ankizy iray dia manana fahitana tena tsara alina.
Ny ankizy manana olana amin'ny alalan'ny famakiana rehefa pejy miloko toy ny amin'ny alalan'ny maitso, na mena pejy satria maneho amin'ny alalan'ny ny masony dia mitaraina momba ny masony.
Nahoana ny Olona no Colorblindness
Color fahajambana dia matetika vokatry ny fototarazo aretina.
Ny "Cones" no tompon'andraikitra amin'ny fahitana loko izay hita any amin'ny faran'ny ny maso.
Noho ny tsy fahampian'ny sela Cones, ny ankizy dia teraka miaraka amin'ny loko fahajambana. Araka ny Optometric Dokotera Washington manodidina 8%, ankizilahy dia voakasiky ny loko jamba izay latsaky ny ankizivavy.
Midika izany fa ny tahan'ny ny loko hamafin'ny ankizilahy dia mihoatra noho ny ankizivavy. Sarotra ny mamantatra loko, rehefa mazava ny hamafiny dia ambany.
Raha misy zaza 4 taona volana manomboka ny Cones fandrafetana izay voajanahary amin'ny dingana ara-dalàna ny ankizy.
Raha amin'ny colorblind Cones ankizy no tsy hita popoka izay noho ny ankizy iray dia tsy afaka manavaka ny loko volomparasy matetika izy ireo mahita na mainty raha tokony ho loko mena sy maitso.
Soritr'aretina ny Colorblindness
Tsy midika izany hoe tsy azo ihodivirana ny colorblind tsy mahazo mahita ny loko.
Colorblind Mety tsy manavaka ny loko sy ny mety hampifangaro raha maka loko isan-karazany.
Ny colorblind dia tsy afaka manavaka loko izy ireo mandra-tonga 4 taona.
Ny sasany colorblind tsy afaka mahita loko noho ny aretina antsoina hoe achromatopsia. Zaza iray ihany avy 40 arivo zaza dia vokatry ny "achromatopsia".
About 4 taona ny ankizy dia afaka ny fitsapana ny fahitana loko.
Matetika ny dokotera dia mangataka ny nosokajiana eo miloko mena sy maitso tsipika, na teny na olo-malaza.
Raha toa ny ankizy dia afaka hanasokajiana ny miloko isa na andalana avy eo ny zaza hanadio ny loko fitsapana fahitana fa raha tsy izany dia ny zaza colorblind.
Maro ny fitsapana hafa dia nalaina avy colorblind ny ankamaroany miloko teboka ireo tarehimarika nomena ny ankizy mba hamantatra ny loko ho an'ny mazava vokatra raha toa ka / dia tsy ho afaka ny hamantatra miloko endriky nozaraina nandritra ny tarehimarika.
Ireo isa ireo matetika amin'ny loko mena sy maitso. Fantatsika fa mahazo ny fitsapana dia lafo.
Do not worry because with Vision test https://iristech.co/test-vision Hanampy anao hahita avy colorblind na ianao na tsia tsy fandoavana denaria iray.
Tsy midika izany fa misy loko jamba tsy mahazo mahita ny loko na mametra ny fahafahan'ny asa ny fahitana loko.
Izany fotsiny ny zava-misy izay vokatry ny fiovan'ny fototarazo * mampita ny alalan 'ny fandovan.
Manam-pahaizana no milaza fa rehefa tonga ny zaza ny taona 4 dia tsy maintsy manamarina fa ny fahitana loko fitsapana.
Mampianatra azy ireo ny loko, ary koa ny fanazavana hanampiana ireo mba hamantarana ny toerana misy ny fifamoivoizana jiro izay tsy afaka manavaka ny loko mena sy maitso.
Vision no vahaolana tonga lafatra ho an'ny colorblindness. Hahazo ny rindrambaiko sy ianao dia ho afaka ny hahita ny loko ara-dalàna tsy misy blurriness.
Close mofomamy PopUp
Mampiasa tranonkala ity mofomamy: Amin'ny manohy mijery ity Ndao no manaiky izany politika.